Ngaba uyabona oko kulandwa nguGoogle? | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 23, 2012 Douglas Karr
UGooglebot yibhotolo kaGoogle ekhasayo web (ngamanye amaxesha ikwabizwa ngokuba “sisigcawu”). Ukurhubuluza yinkqubo ethi uGooglebot afumanise amaphepha amatsha ahlaziyiweyo ukuba ongezwe kwisalathiso sikaGoogle. Sisebenzisa iseti enkulu yeekhompyuter ukulanda (okanye "ukukhasa") iibhiliyoni zamaphepha kwiwebhu. UGooglebot usebenzisa inkqubo yealgorithmic: iinkqubo zekhompyuter zichonga ukuba zeziphi iisayithi ezirhubuluzayo, kangaphi, kwaye mangaphi amaphepha anokulandwa kwindawo nganye. Isuka kuGoogle: Googlebot
Ukulandwa kukaGoogle, ukukhasa kunye nokuthwebula umxholo wephepha lakho ohlukileyo kwisikhangeli. Ngelixa uGoogle enako ukukha ukubhala, kuyenzeka hayi kuthetha ukuba iyakuhlala iphumelela. Kwaye ngenxa yokuba uvavanya ukukhokelela kwisikhangeli sakho kwaye iyasebenza, oko akuthethi ukuba uGooglebot uqondisa ngokufanelekileyo ukugcwala. Kuthathe ingxoxo phakathi kweqela lethu kunye nenkampani yokubamba ngaphambi kokuba siqonde into abayenzayo… kwaye isitshixo sokufumanisa ukuba yayikukusebenzisa Landa njengoGoogle Isixhobo kwii-Webmasters.
Ukulanda njengesixhobo sikaGoogle kukuvumela ukuba ungene kwindlela ngaphakathi kwendawo yakho, jonga ukuba uGoogle ubenakho na ukuyikroba, kwaye ubone umxholo osiweyo njengoko uGoogle esenza. Kwabaxumi bethu bokuqala, sikwazile ukubonisa ukuba uGoogle wayengafundi iskripthi njengoko babenethemba. Kumthengi wethu wesibini, sikwazile ukusebenzisa indlela eyahlukileyo yokuhambisa iGooglebot.
Ukuba ubona Iimpazamo zokurhubuluza ngaphakathi kwe-Webmasters (kwicandelo lezeMpilo), sebenzisa i-Fetch njenge-Google ukuvavanya ukuqondisa kwakhona kwaye ujonge umxholo ufunyanwa nguGoogle.
tags: landa njengegooglebotgooglebotisikhewu